Window Registry ဟာ ကွန်ပျူတာမှာ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရာမှာ ပိုပြီးတော့ stability နဲ့ Reliability ရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ် Window Default Application Install လုပ်ထားတဲ့ Application User Information System Information Security ပိုင်းဆိုင်ရာ Network Information Driver Information စတာတွေပါဝင်ပါတယ် ။ Registry ဟာ Tree ပုံစံနဲဖွဲ့စည်းထားပြီး Folder နဲ့ File ဖွဲစည်းပုံအတိုင်း တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Key, Sub key, Name , Data Type , Value တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Logical Group ဟာ window ရဲ့ Run Box ကနေ regedit လို့ ရိုက် လိုက်ရင် ပေါ်နေတဲ့ အပိုင်း ၅ ပိုင်းကတော့ Root Folder အပိုင်းဖြစ်ပါ တယ် Key လို့လဲ ခေါ်ပါတယ် HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG အထက်ပါ ၅ ပိုင်းကိုတော့ တစ်ပိုင်းစီကို Keys လို့သတ်မှတ်ပါတယ် Key တစ်ခုခြင်းအောက်မှာ သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းအလိုက် SubKey တွေရှိပါတယ်။Sub keys တစ်ခုစီမှာလဲ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ Subkey တွေရှိပါတယ်။ ========================= HKEY_CLASSES_ROOT Software နဲ့ပတ်သတ်တဲ့
လာမည့် 2019 ခုနှစ်တွင် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် Cyber တိုက်ခိုက်မှုများအား ခန့်မှန်းချက်
1. Organization အများစုဟာ Cloud ကိုအသုံးပြုလာကြပါသည်။ သို့ပေမဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် သေချာစွာ ပြုလုပ်မထားကြတဲ့အတွက် Cloud ကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ 2.လွယ်ကူပြီးခန်ကမှန်းရလွယ်တဲ့ Password များ၊ Multi log in တွေအတွက် Password ကို တစ်ခုထဲပေးထားခြင်းများမှ အခွင့်ကောင်းယူကာ တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ 3. “Ransomware, cryptomining, banking Trojans and VPN filters စတဲ့ Malware များသည်လည်း ပုံစံအမျိုးမျိုး အနေအထား အမျိုးမျိုးပြောင်းကာ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ 4. Cyber လုံခြုံရေးအသိ အားနည်းသော ၀န်ထမ်များကို အသုံးချကာ Social Engineering နည်းလမ်းများဖြင့် တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ 5.Internet of things (mobile phone) များသည် Organization Security Plan ထဲမှာပါဝင်မှုမရှိသလောက် ဖြစ်သောကြောင့် IOT များကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ 6.DDos တိုက်ခိုက်မှုများသည် နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ တိုက်ခိုက်မှု နည်းပါးလာသော်ကြောင့် သတိမပြုမိကြတော့ပါ. ဒါပေမဲ့ ထိုအားနည်းချက်ကို အသုံးချကာ တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ (Hacking is Not The Race) 7. IT department မှ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ၀န်ထမ်းများ အသုံးချသော Soft
What is Cyber Forensics Part (22) Evidence Device Cloning and Hashing Investigation လုပ်ရာမှာ မူရင်းသက်သေခံပစ္စည်း (Computer,Laptop, HD, Stick, CD/DVD, Phone) ကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုသင့်ပါ။ မူရင်း Device ကို Clone ပွားပြီး စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရလာတဲ့ Clone ကလဲ မူရင်းနဲ့ Hash Value တူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Post မှာတော့ Device တင်မက မူရင်း Device ထဲမှာပါတဲ့ file တွေကိုပါ hash Value ထုတ်ပြထားပါတယ်. Clone လုပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုထားတာကတော့ Access Data FTK manager ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား Clone နဲ့ Hash Value လုပ်နိုင်တဲ့ tools တွေရှိပေမဲ့ နိုင်ငံတကာက Law Enforcement အဖွဲ့တွေအသုံများတဲ့ Access Data FTK manager ကိုသုံးရခြင်းကတော့ တရားရုံးမှာ သက်ေ သခံတဲ့အခါ ပိုပြီး Save ဖြစ်အောင်ပါ။ ပုံ (၁) ကတော့ သက်သေခံ မူရင်း Memory Stick Device ရဲ့ Hash value ကို ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ (Stick က ကျွန်တော် Stick ပါ :D ) FTK က MD5 and SHA1 ကိုထုတ်ပေးမှာပါ။ ပုံ(၂) မကြာခင် သက်သေခံ မူရင်း Memory Stick Device ရဲ့ Hash valueရလာပါတယ်။ ပုံ (၇) မှာ မူရင်းနဲ့ Clone တို့ရဲ့ Hash Value ကိုပြထားပါတယ်။ ပုံ (၃) သက်သေခံ မူရင်း Memory
What is Cyber forensics ? Part (21) Memory forensics Ram ဆိုတာ ဘာဖြစ်တယ် ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ အခု post မှာ မပြောတော့ပါဘူး ... ကွန်ပျူတာ Power Off တာနဲ့ Ram ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Information တွေပျက်စီးသွားပါတယ် .. Ram ကနေဘာတွေရနိုင်မလဲ End point Security (antivirus) အချို့က Ram ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတဲ့ Virus မျိုးကို မစစ်ဆေးနိုင်ကြပါဘူး ဒါကြောင့် malware Forensics လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အသုံးဝင်ပါတယ် Computer စဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ရိုက်လိုက်တဲ့ username password , Browser History , Internet Connection LAN,Wireless (IP address DNS) ,Open Port, Some chat message အစရှိသည်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ Memory Forensics ပြုလုပ်ရမည့်အချိန်ကတော့ computer On နေတဲ့အနေအထားမှာပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. Computer ရဲ့ ram ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး Memory Dump File Size ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ။အခု ကျွန်တော်စက်ဆို 16 GB ရှိတဲ့အတွက် dunp file က 16 GB ရရှိပါတယ်။ အခုအသုံးပြုထားတာတော့ Magnet Memory Forensic နဲ့ Magnet IEF တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွေမှာ evidence တွေကတော့ နမူနာပဲပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့် PC ကိုပဲစမ်းစပ်ထားခြင